Chigadzirwa chigadzirwa: Chii icho, nzira yekusarudza, maitiro ekukura | ECommerce nhau
Kana iwe uine eCommerce unoziva kuti iwe unofanirwa kutengesa zvigadzirwa zvakasiyana kuti ugone kupa akasiyana kune ako vatengi. Nekudaro, zvese izvi zvigadzirwa zvinogona kufanana, zvichibva zvakanyanya pamutengo, kushandiswa, nezvimwe. Izvi ndizvo zvinonzi chigadzirwa chigadzirwa.
Asi chii chinonzi chigadzirwa mutsara? Sei zvichikosha? Hunhu hupi hwavanadzo? Inogona here kuwedzerwa kana kuderedzwa zvichibva pane zvaunoda iwe? Kana iwe wanga uchifunga nezvazvo, pano tichaenda kukuenzanisira iwe pachinhu kuti iwe uve neruzivo rwuri nani rweichi pfungwa.
1 Chii chinonzi chigadzirwa mutsara
1.1 Chigadzirwa mutsara vs chigadzirwa renji
2 Maitiro ekusarudza mutsara wechigadzirwa
3 Maitiro ekuwedzera mutsara wechigadzirwa
Chii chinonzi chigadzirwa mutsara
Mutsara wechigadzirwa unotsanangurwa seboka rezvigadzirwa zvinotengeswa nekambani. Ndokunge, izvo ndizvo zvigadzirwa zvinoiswa pakutengesa, kungave kunyama kana online.
Izvi zvigadzirwa zvine hukama kune mumwe nemumwe, ndiko kuti, zvine hunhu hwakafanana pakati pavo zvakakamurwa navo. Uye zvakare, chimwe nechimwe chezvigadzirwa chakazvimirira uye panguva imwechete chakasiyana kubva kune chimwe.
Chigadzirwa mutsara vs chigadzirwa renji
Vazhinji vanovhiringidza mutsara wechigadzirwa neyakagadzirwa chigadzirwa. Kunyangwe iwo akafanana, uye aine mamwe maitiro akafanana kana akaenzana kune mumwe nemumwe, chokwadi ndechekuti iwo mazwi maviri akasiyana zvachose.
Kune rimwe divi, mutsetse wechigadzirwa iseti yezvigadzirwa zvine hunhu hwakafanana uye kuti makambani anopa kune vatengi vavo. Mhando yezvigadzirwa inopihwawo nemakambani kune vatengi vayo asi, kusiyana neiyo yapfuura, mune ino zvigadzirwa zvigadzirwa zviri chikamu cheyakagadzirirwa.
Kuti zvijekese kwauri. Fungidzira munhu anodhira. Iyo kambani inogona kunge iine akawanda deodorant zvigadzirwa, uye zvese zvine hukama muhunhu hwavo. Asi zvakadiniko nezverudzi rwechigadzirwa? Izvi zvingave, semuenzaniso, sarudzo yehutsanana zvigadzirwa.
Mune mamwe mazwi, tinogona kutaura kuti chigadzirwa chigadzirwa ndicho icho chinosanganisirwa muzvikamu zvidiki zveCommerce nepo chigadzirwa chingave chiri chikuru zvikamu: chikafu, zvigadzirwa zvehutsanana, zvigadzirwa zvepedyo, nezvimwe.
Kazhinji, iyo chigadzirwa chigadzirwa chinogadzira huwandu hukuru hwezvigadzirwa sezvo isina kuvakirwa chete pane mamwe maitiro, asi yakajairika (kwete senge iri mumutsetse.
Uye hunhu hupi hune mutsetse wechigadzirwa? Pakati pavo, tinotaura nezve:
Izvo zvigadzirwa zvinopihwa mumutsara wechigadzirwa zvakafanana chaizvo kune mumwe nemumwe, zvichipa kubva kune yakafanana dhizaini kune akafanana mabasa.
Ivo vakatarisa kune imwecheteyo mhando yevatengi.
Mutengo wavanazvo wakafanana chaizvo pakati pezvigadzirwa.
Kugovera kunoitwa kuburikidza neiyo imwechete chiteshi.
Zvese izvi chinhu chinosiyanawo kubva pachigadzirwa renji pachayo.
Maitiro ekusarudza mutsara wechigadzirwa
Iwe unotoziva kuti chigadzirwa mutsara chii. Iwe unoziva mutsauko neyakagadzirwa chigadzirwa uye iwe unoziva izvo hunhu hunotsanangura icho. Asi, paunenge uchizotanga eCommerce, kana muchitoro, sarudzo yekutanga yaunofanirwa kutora ndeyekuziva zvauchatengesa. Ndokunge, kana iwe uchizotengesa huwandu kana mutsara wezvigadzirwa.
Semuenzaniso, hazvina kufanana kutengesa mapuroteni kuzunungusa kupfuura huwandu hwezvigadzirwa zveprotein, nekuti zvinosanganisira kuzunza, yogati ...
Chaizvoizvo, sarudzo yemutsara wechigadzirwa inotorwa panguva imwechete yaunosarudza mhando yezvigadzirwa zvauchazotengesa (uye chikamu chauchayedza kugadzirisa). Kana iwe uchizotengesa matoyi, panogona kunge paine huwandu hwakawanda, asi iwe unogona kugara uchisarudza mutsara weaya zvigadzirwa.
Ungasarudza sei? Iwe unofanirwa kuzvisimbisa pane zvinotevera:
Mune ruzivo rwako. Hazvina kufanana kutengesa chimwe chinhu chausingazive, pane chimwe chinhu chaunoita. Kunyanya nekuti iwe unopa chivimbo chakawanda nekuita vatengi kuti vaone kuti wakazviedza uye kuti unoziviswa nezvese zvaunoda kuti uzive.
Zvinodiwa. Hapana mubvunzo kuti kana ukasarudza chigadzirwa chinodiwa nemunhu wese uchave nemikana yakawanda yekutengesa pane kana uchizvipira kune chigadzirwa chigadzirwa chisina munhu anoda. Semuenzaniso, unogona here kutenga VHS vhidhiyo? Inonyanya kuitika ndeyekuti kwete. Asi iwe haungataure zvakafanana kana iri DVD player (uye zvakadaro zvese zvatova zvechinyakare). Mune mamwe mazwi: tsvaga kutengesa zvigadzirwa zvinodiwa uye zvinodikanwa, saka uchave nemukana wakawanda.
Tsvaga kukwidza. Iwe unofanirwa kusarudza zvigadzirwa zvinokwezva zvechokwadi kune vatengi, izvo zvinokwezva kutariswa uye ivo vanonzwa kuti kana vasina izvo, saka havasi vane fashoni kana vasina kufanana nevamwe.
Maitiro ekuwedzera mutsara wechigadzirwa
Paunenge uchinge uine chigadzirwa mutsara, haifanirwe kunge ichiganhurirwa. Kunyangwe pakutanga zvichikurudzirwa kuti usafukidze zvakawandisa, nenguva iwe yaunogona.
Mune ino kesi, iko kuwedzera kunogona kuitiswa munzira dzakasiyana: kumusoro (nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemutengo wakakwirira), zvichidzika (zvichipa zvigadzirwa zvemhando yepasi nemutengo) kana mune zvese zviri zviviri (zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye yakaderera panguva iyoyo) .
Kana zvasvika pakuwedzera chigadzirwa chigadzirwa Iwe unofanirwa kutevera nzira yakadzidzwa inoenderana nekutumwa kwekambani, sarudzo dzayo, vateereri uye zvigadzirwa. izvo zvandaigona kuedza.
Nekudaro, usati wafunga nezvekuwedzera, zvakafanira kuti ufunge nezvekuti zvinoshanda here kana kwete, kana paine vateereri pazviri, kana zvigadzirwa zvinoenderana nemufananidzo wekambani, uye kana zvichikwanisika kuita kuwedzera. mukambani (sezvo kuve nemimwe michina yezvigadzirwa kunogona kureva kuwanda kwebasa).
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezve a kutsvagurudza kwakapfuura kuti uzive kana zvakakodzera kuwedzera (Pane nguva dzaunotadza kuronga kuwedzera panguva isiri iyo), zviite panguva iyoyo, uye uwane zvibereko zvakanaka nazvo.
Izvozvi zvave kujekeserwa kwauri kuti chii chigadzirwa tambo, mutsauko wayo nehurefu uye kuti ungawedzera sei, ungashinga kuzviita muCommerce yako? Iwe unofungei nezvenyaya iyi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chigadzirwa chigadzirwa: Chii icho, nzira yekusarudza, maitiro ekukura